Maxey tahay warbixinta cusub ee guddiga dib u heshiisiinta ee Gobalka Gedo ay gudbiyeen? - Allbanaadir
Home Warka Maanta Maxey tahay warbixinta cusub ee guddiga dib u heshiisiinta ee Gobalka Gedo...
Maxey tahay warbixinta cusub ee guddiga dib u heshiisiinta ee Gobalka Gedo ay gudbiyeen?
Waxaa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Jubbaland kulan ku yeeshay Guddiga xalinta khilafaadka arrimaha gobolka Gedo, ayaa kulan la qaatay salaadiinta, Ugaasyada iyo odayaasha dhaqanka.
War saxaafadeed xalay ka soo baxay Midowga Musharaxiinta ayaa lagu sheegay iney khilaafyada doorashada ay taagan iney kamid tahay arrinta gobalka Gedo oo wax xal ah aan laga gaarin.
Maamulka Axmad Madoobe ayaa ka dhur sugaya kulamada wafdi heeer wasiiro ah oo loo saaray arrinta gobalka Gedo waxaana muuqata in wax walba aysan ku socon sidii uu rabay Axmad Madoobe.
Gedo ayaa kamid ah meelaha ugu waa weyn ee khilaafka doorasho ee dalka ka taagan yahay islamarkaana uu aad u daneynayo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday.